Thursday August 09, 2018 - 14:08:14 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
Hargeisa (Burcoonline) 09.08.2018 Inkastoo iminka ay xukuumadda Muuse Biixi ka baxday cuseybkii. madaama ay muddo 9 bilood ah taladda dalka haysey. Ayaa iminka waxaa bilaabmaaya dhaliilaha wixii ay lahayd. isla-markaana hamigii ay qabeen shacabku S/land inaanu muuqan. ilaa iminka ma jirto wax reebi kara raad iyo wax-qabad qiimo leh oo lagu xusuusto, mudadii ay joogtay xafiiska. Iskaba daa wax-qabad kalee , Waxaa hoos u dhac weyni ku yimi habsami u socodkii hanaanka dowladnimo. oo iminka u muuqda inuu meesha ka sii baxaayo. Iyadoo mudadaasi dalku madaxa la galay xaalado dhaqaale-xumo. Maamul-xumo . Nin jeclaysi , Colaado gudde iyo dibadba leh iwm. sidoo kale waxaa wadanka Somaliland la soo deristay dagaalo diblo-maasiyadeed oo kaga imanaaya dalalka yaryar ee Somaaliya Iyo Jabuuti, kuwaasi oo salka haya arimo dano siyaasiya iyo kuwo ganacsi ku qotoma